Genesisy 30: 1-43
Genesisy 29 Genesisy 30 Genesisy 31
Ary hoy izy: Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo ampofoako izy, mba hahazoako zaza aminy.
Dia nanan-anaka Bila ka niteraka zazalahy tamin'i Jakoba.
Dia nanan-anaka indray Bila, ankizivavindRahely, ka niteraka zazalahy faharoany tamin'i Jakoba.
Ary Zilpa, ankizivavin'i Lea, dia niteraka zazalahy faharoany tamin'i Jakoba.
Ary nivoaka nitsangantsangana Robena tamin'ny andro fijinjam-bary ka nahita dodaima naniry tany an-tsaha, dia nitondra azy ho any amin'i Lea reniny. Ary hoy Rahely tamin'i Lea: Veloma hianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman'ny zanakao.
Ary Andriamanitra nihaino an'i Lea, dia nanan-anaka izy ka niteraka zazalahy fahadiminy tamin'i Jakoba.
Dia nanan-anaka indray Lea ka niteraka zazalahy faheniny tamin'i Jakoba.
Ary Andriamanitra nahatsiaro an-dRahely, dia nihaino azy ka nampanan-anaka azy.
Ary nanan-anaka izy ka niteraka zazalahy; dia hoy izy: Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra.
ARY rehefa niteraka an'i Josefa Rahely, dia hoy Jakoba tamin'i Labana: Alefaso aho hankany amin'ny fonenako sy ny taniko.
Ary hoy Labana taminy: Masìna hianao, raha nahita fitia eo imasonao aho, mitoera eto amiko, efa namantatra aho, ka fantatro fa avy taminao no nitahian'i Jehovah ahy.
Ary hoy Jakoba taminy; Fantatrao ny nanompoako anao sy ny toetry ny omby aman-ondrinao tato amiko.
Ary hoy izy: Inona ary no homeko anao? Ary hoy Jakoba: Tsy hanome ahy na inona na inona hianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman-osinao:
Handeha hitety ny ondry aman-osinao rehetra aho anio ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra, ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy; koa ireny no ho karamako.
Ny fahamarinako no ho vavolombeloko amin'ny andro ho avy, raha tonga hianao handinika ny karamako: izay rehetra tsy mara ary tsy sada eo amin'ny osy, ary izay tsy mainty eo amin'ny ondry, dia ho halatro izany.
Dia navahany tamin'izany andro izany ny osilahy sadika sy sada, ary izay osivavy rehetra mara sy sada, dia izay rehetra nisy fotsy, ary ny mainty rehetra teo amin'ny ondry; dia natolony teo an-tanan'ny zanani-lahy ireny.
Ary nasiany lalankateloana teo anelanelan'izy sy Jakoba; ary Jakoba niandry ny ondry aman-osin'i Labana sisa.
Ary Jakoba dia naka tsora-kazo maro tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana; ka nataony ofy vandana ireny hisehoan'ny fotsy izay teo amin'ny tsora-kazo.
Ary ireny tsora-kazo voaofiny ireny dia napetrany teo anoloan'ny ondry aman-osy, teo anatin'ny tavin-drano, dia teo amin'ny fisotroan-drano, izay nalehan'ny ondry aman-osy hisotro, ka nikambana teo ny lahy sy ny vavy, raha avy hisotro rano izy.
Dia nikambana tandrifin'ny tsora-kazo ny ondry aman-osy ka niteraka sadika sy mara ary sada.
Ary ny zanak'ondry navahan'i Jakoba, ary ny ondry sisa dia nataony manatrika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry aman-osin'i Labana; ary natokany izay ondry aman-osy ho azy ka tsy navelany hiharo tamin'ny ondry aman-osin'i Labana.
Ary na oviana na oviana no hikambanan'ny ondry aman-osy matanjaka, dia napetrak'i Jakoba teo anatin'ny tavin-drano teo anoloan'ny mason'ny ondry aman-osy ireny tsora-kazo ireny, mba hikambanany eo anilan'ny tsora-kazo.
Fa raha osaosa kosa ny ondry aman-osy, dia tsy mba napetrany teo ireny; ka dia ny osaosa no an'i Labana, fa ny matanjaka kosa no an'i Jakoba.
Dia nitombo harena indrindra ralehilahy ka nanana ondry aman-osy betsaka ary andevovavy sy andevolahy ary rameva sy boriky.